VaEmmerson Mnangagwa vachishanyira kuManicaland panguva yeCyclone Idai muna 2019
Hofisi yevanoona nezvekufambiswa kwemari mumapazi ehurumende kana kuti Auditor General, Amai Mildred Chiri inoti mari yerubatsiro uye zvimwe zvikwanisiro zvakapihwa vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura nedutumupengo remhepo kana kuti Cyclone idai muna 2019 yakabiwa kana uye haina kushandiswa zvayaifanira kushandiswa munguva zhinji.
Mugwaro rekuongorora mashandisirwo emari iyi, hofisi iyi inoti pamari inosvika mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanhu kana kuti US$4,5 million us dollars, mari inosvika chikamu chimwe kubva muzana kana kuti 1% ndiyo chete yakashandiswa zvaitarisirwa.
Chimwe chikafu chinonzi chakaora chiri mumatura nekukundikana basa kwemapazi ehurumende anoti rezvematunhu, remari uye Civil Protection Unit inoona nezvenjodzi iyo inonziwo yakakundikana kuyambira vanhu nezvenjodzi pachiine nguva.
Chimwe chikafu chinonzi chakangonzi chapihwa vanhu asi pasina kana magwaro anoratidza kuti izvi zvainge zvaitika.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari Muzvinafundo Mthuli Ncube kanawo gurukota rezvematunhu VaJuly Moyo sezvo vange vasiri kudaira nharembozha dzavo.
Asi mukuru weCPU VaNathan Nkomo vaudza Studio 7 kuti havasati vapirwa nyaya iyi nemakurukota ehurumende asi vati vakazvipira kuzadzikisa zviri kunzi zvinofanira kugadziriswa negwaro iri.
Vachitaura neStudio 7, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica musangano rekurwisa huori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa VaAlois Chaumba vati zvitori nani uti vanopa rubatsiro vashande nemasangano akazvimirira oga nekuti muhurumende mune huori hwakanyanyisa.
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nemakurukota avo vakaita chipatapata kuenda kuManicaland pakaitikaa mafashamu aya vachivimbisa kubatsira asi vagari venzvimbo iyi vakawanda vanogara vachiudza Studio 7 kuti hapana zvinobatsika zvavari kuwana kubva kuhurumende. Vamwe vavo vachiri kugara mudzimba dzematende.
Hurukuro naVaAlois Chaumba